Columbus, OH | Xafiiska Booqashada Taxaddarrada Coronavirus | Caafimaadka PW
Kataxadarista fayruuska Corona
HALKAN HOOSE SI AAD U DAAWATO WARBIXIN KU SAABSAN FDA OO KU SAABSAN JOOHNSON & JOHNSON TALLAALKA QAADAN
QAADASHADA IYO MACLUUMAADKA KORONAVIRUS
Haddii aad isku aragto astaamo sida qufac, qandho, ama neefta oo kugu yaraata, fadlan wac xafiiska kahor booqashadaada. Iyadoo la raacayo talooyinka CDC iyo Waaxda Caafimaadka Ohio, waxaan ku xaddideynaa bukaannada inay keenaan oo keliya 1 soo booqde Majiraan marti kale oo loo ogolaan doono xafiiska. Wax caruur ah looma ogola xafiiska waqtigaan. Haddii aadan awoodin inaad diyaarsato xanaanada cunugga fadlan wac xafiiska kahor waqtiga si aad xafiiska ula qabanqaabiso.
Ogaysiis Ku Saabsan Dib U Soo Noqoshada Booqashooyinka Ka Hortagga ah, 1 Meey 2020
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafey bulshooyinkeennu way is beddeleen oo ay soo mareen isbedelo badan oo deg deg ah COVID-19 awgood. Qofkasta oo halkan jooga Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka wuxuu rajeyneyaa in adiga iyo qoysaskaaguba aad sifiican uquruxsan tihiin oo aad laqabsateen isbadaladan.
Ficil ahaan, waxaan sii wadnay inaan siino daryeel caafimaad oo aad ufiican dhamaan bukaankeena. Waxaan helnay habab cusub oo lagula xiriiro bukaannadeena telemedicine. Halkan xafiiska waxaan ka wadnay taxaddarro dheeri ah si aan u ilaalino bukaannadeenna iyo shaqaalaheenna labadaba.
Markaan u gudubno wejigan soo socda, waxaan bilaabi doonnaa inaan aragno bukaanno badan oo xafiiska ku soo laabtay. Si kastaba ha noqotee waxaan sii wadi doonnaa inaan ku bixinno booqashooyin gaar ah telemedicine. Waqtigaan, waxaan sidoo kale dib u bilaabi doonnaa imtixaanada dumarka ee wanaagsan sidoo kale waxaan ku bixin doonnaa xafiisyada baaritaanka naasaha. Waxaan kuu xaqiijin karnaa inaan hayno ilaalinno naga caawiya xafiiskayaga inuu noqdo bey'ad caafimaad qabta oo nabdoon.
Kuwa idinka mid ah ee xafiiska u imanaya booqashooyinkaaga waxaad ku arki doontaa xoogaa isbeddello ah. Kahor intaadan soo galin xafiiska, xubin kamid ah shaqaalaha ayaa qaadan doona heerkulkaaga. Iyadoo lagu saleynayo talooyinka waaxda caafimaadka, qof kasta oo heerkulkiisu yahay 100.4 iyo wixii ka badan waxaa laga codsan doonaa inuu dib u dhigto ama haddii ay khuseyso, ku sameeyo booqashadooda telemedicine. Haddii aad leedahay maaskaro, fadlan u xiro ballantaada. Kuwa idinka mid ah oo aan indho shareer lahayn waxaan idin siin doonnaa mid. Intaas waxaa sii dheer, waxaan codsaneynaa in bukaanku uusan wax caruur ah la imaanin ballantooda. Martida kaliya ee aan u ogolaaneyno waqtigan waa lammaanahaaga inta lagu gudajiray saddexda bilood ee ugu horeysa iyo sidoo kale ultrasound-kaaga 1-aad. Waxaan ogsoonahay in uurku yahay waqti qaas u ah adiga iyo lammaanahaaga laakiin siyaasadani waxay yareyneysaa tirada dadka xafiiska jooga waxayna yareyneysaa soo-gaadhista suurtogalka ah ee qof walba. Caafimaadkaaga iyo badbaadadaadu waa mudnaantayada koowaad.
Fadlan ha ka waaban inaad wacdid xafiiska wixii su'aalo ah. Waxaan sugeynaa inaan kugu aragno xafiiska!
TALOOYIN KA SOO BAXAY KOOXDA AMARKA EE DHALINYARADA IYO JINSIYADA EE KU SAABSAN UURKA UURKA IYO LACAG-SIINTA LOOGU TALAGALAY
Halkan Guji si aad u Daawato
BAYAANKA BULSHADA EE LOOGU TALAGALAY CAAFIMAADKA DHAQANKA EE LOOGU TALAGALAY SARS-CoV-2